‘तपाईलाई अफ्यारो परे खबर गर्नुहोस् घर–घरमै खाद्यन्य ल्याइदिन्छौं’ : जयनारायण साह– अध्यक्ष, झापा गाउँपालिका - Purbeli News
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र २५, २०७६ समय: ११:१२:०६
कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमणका कारण विश्वभर हजारौंले ज्यान गुमाएका छन् । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा फैलन नदिन सरकारले मुलुकलाई दुई सातादेखि कलडाउन गरेको छ ।
सरकारले अझैं लकडाउनलाई बढाएर थप सचेतना रहन सबैलाई आवहान गरिरहेको छ । सरकार पनि यतिखेर कोरोना संक्रमणका विरुद्धमा योजनाबद्ध ढङ्गले होमिएको छ । कोरोनाको प्रभावबाट मुक्त पार्न झापा गाउँपालिकाले के कस्ता कार्यहरू गरिरहेकाे छ तथा अागामी याेजनाहरू के कस्ता रहेका छन् लगायत विविध बिषयमा झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहसंग गरिएकाे कुकाकानी
काेराेना नियन्त्रणका लागी स्थानीय सरकारको हैसियतमा झापा गाउँपालिकाले अहिले के–के गरिरहेको छ ?
संसार नै कोरोना भाइसरको भूमरिमा फरिसरेको अबस्थामा झापा गाउँपालिका पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । संघीय सरकारले मुलुकलाई लकडाउन गर्नु भन्दा एक दिन अघि नै हामीले झापा गाउँपालिकालाई लकडाउन गरिसकेका थियौं । विहारसंग सिमा जोडिएको झापा गाउँपालिका त्यसैपनि उच्च जोखिममा छ । जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै हामीले गत चैत १० गतेदेखि नै समग्र झापा गाउँपालिकालाई लक डाउन गरेर झापावासीलाई सचेतना अपनाउन विभिन्न उपायहरु सिकाउँदै आएका थियौ र अहिले पनि सचेतनाका कार्यक्रम घर –घरमा लिएर गइरहेका छौं ।
झापा गाउँपालिकामा विपन्न समुदायको बसोवास बढी छ । अहिलेको हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता भनेको झापावासीलाई कसरी कोरोनाबाट सुरक्षित राख्ने र उनीहरुलाई खानाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमै केन्द्रीत छ । जसका लागि हामीले पहिलो चरणमा सबै झापावासीलाई कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घर–घरमै पुगेर सचेतना शिक्षासंगै माक्स बितरण ग¥यौ । हामीले झण्डै २८ हजार पिस माक्स बितरण गरिसकेका छौं । त्यो संगै सावुन पानीले राम्ररी हात धुने, हिनडुल गर्दा माक्सको प्रयोग गर्ने , भीडभाडमा नजाने लगायतका सचेतना शिक्षा प्रदान गरेका छौं । अहिले संघीय सरकारले नै समग्र मुलुकलाई लकडाउन गरेका कारण हामीपनि संघीय सरकाको निर्देशनलाई पालन गरिरहेका छौं । अहिले झापा गाउँपालिका पूर्ण रुपमा लकडाउन छ । खाद्यन्यका पसल वाहेक अरु सवै पसल बन्द छन् । खाद्यन्य खरिदका लागि पनि दूरी कायम गरेर किनमेल गर्न सिकाइएको छ । अहिले सबै जनप्रतिनिधिको ध्यान आफ्ना गाउँवासीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र उनीहरुको ज्यान कसरी बचाउने भन्नेमा केन्द्रीत छ ।
विपद् व्यवस्थापनको काम चाँही कसरी गर्दै हुनुुहन्छ नि । अनि, विपन्न परिवारलाई राहतको पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले गाउँपालिका भित्र विपद् व्यवस्थापनका लागि समिति बनाएका छौं । गाउँपालिका स्तरीय मूल समिति छुट्टै छ भने प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा पनि समिति छ । सोही समितिले प्रत्येक नागरिको घर– घरमा पुगेर उनीहरुको अवस्था के छ ,उनीहरुलाई के कस्तो समस्या परेको छ त्यो वुझ्ने काम गर्दै राहत बाढ्ने काम भइरहेको छ । पहिलो चरणमा हामीले राहत पनि बाढी सकेका छौं । जो अति विपन्न छन् उनीहरुलाई हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट राहत बाढेका हौं र विपन्नको पहिचान गर्दै दोस्रो चरणको पनि राहत बाढ्ने कार्य जारी छ ।
झापा गाउँपालिकाको कूल घरधुरी कति हो अनि कति विपन्न परिवारको वसोवास रहेको छ ?
झापा गाउँपालिका भनेकै विपन्नहरु बस्ते गाउँपालिका हो । यहाँ झण्डै पाँच हजार परिवार विपन्न छन् । झापा गाउँपालिका जिल्लाको दक्षिण पूर्वी भू– भागमा रहेको छ । २०७३ सालमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयले ७४४ स्थानीय तह लागू गर्दा झापा जिल्लामा साबिकको कुमरखोद, टाघनडुब्बा र शरणामति गाउँ बिकास समितिहरुलाई झापा गाउँपालिका बनाईएको हो ।
झापा गाउँपालिकाको कूल क्षेत्रफल ९४.१२ वर्ग कि.मि रहेको छ । यो गाउँपालिका ७ वडा मा विभाजन गरिएको छ । २०६८ को जनगणना अनुसार यस गाउँपालिकाको कूल जनसङ्ख्या ३४,६०१ रहेको छ । तर अहिलेको जनसंख्या करिव ४१ हजार पुगेको छ । यस गाउँपालिकाको सिमाना पूर्वमा बाह्रादशी गाउँपालिका, पश्चिममा गौरिगंज गाउँपालिका र शिवसताक्षी नगरपालिका उत्तरमा कन्काई नगरपालिका र दक्षीणमा बिहार (भारत) रहेको छ ।
आठ हजार तीन सयको हाराहारीमा घर धुरी रहेको झापा गाउँपालिकाका अति विपन्न परिवारको पहिचान गर्दै भीडभाड नगरी हामी जनप्रतिनिधि अहिले घरघरमै राहत पु¥याउने काम पनि गरिरहेका छौं । हामीले झण्डै २७ सय १९ परिवारलाई खाद्यन्य पु¥याइसकेका छौं । शुरुमा हामीले तथ्याङक संकलन गर्दा तीन हजारको हाराहारीमा गरेका थियौं तर, घर– घर गएर हेर्दा अवस्था त्यस्तो रहेनछ । अहिलेको पछिल्लो डाटामा हाम्रो गाउँपालिकामा पाँच हजार भन्दा बढी विपन्न परिवार रहेछन् । उनीहरुलाई खाद्यन्य पु¥याउनु पर्छ । सिमित श्रोत र साधनले मात्रै नपुग्ने भएपछि हामीले दाताहरुले प्रदान गरेको खाद्यन्य पनि वितरण गरिरहेका छौं । जसका लागि नेपाल सरकारकै मातहतमा रहेको खाद्य संस्थान मार्फत चामल खरिद गरेका छौं भने दाल,तेल, नून,सावुनका लागि २४ घण्टे टेण्डर आवहान गरेका छौं । न्यूनतम मूल्यमा जसले टेन्डर पार्छ उसैलाई सामग्री खरिदका लागि दिन्छौं ।
राहतका सामगीमा प्रतिपरिवार कति र के – के प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले सुरुको चरणमा माक्स बितरण गरेका थियौं । यो सचेतना शिक्षा अन्तरगत गरिएको हो । त्यसपछि हामी अहिले खाद्यन्य बितरण गरिरहेका छौं । खाद्यन्यमा चामल, दाल, नुन, तेल, सावुन आदि वितरण हुँदैछ । यो काम वडा कार्यालय मार्फत हुँदैछ । प्रतिपरिवारलाई १० केजी चामल, एक केजी नुन, एक केजी दाल, एक पोक तेल, एउटा सावुन दिन्छौं । हामी जनप्रतिनिधिले विपन्न परिवारको घर– घरमा सानो गाडीको सहायताले राहत बाढिरहेका छौं । कोही पनि स्थानीयवासीलाई हामी जनप्रतिनिधिले जम्मा हुन दिदैनौं । नीहरुलाई घर भित्रै सुरक्षित रहन आग्रह गर्दै आएका छौं ।
कुन वडाममा धेरै विपन्न परिवारको वसोवास छ ?
अधिकांश झापावासी विपन्न रहेछन् । त्यसमा पनि धेरै विपन्न परिवार भएको वडा ४ नम्वर रहेछ । यो वडामा शुरुको तथ्याङ्क हेर्दा ८ सय ४१ जना विपन्न परिवारको वसोवास देखियो । लकडाउन लम्विएसंगै विपन्नको संख्या बढेर जान्छ । विहान वेलुका खान नै नहुनेलाई मात्र हामीले त्यो शुरुको तथ्याङ्कमा समावेस गरेका थियौं । अब महिनादिनसम्म खान पुग्नेहरुलाई पनि राहत दिनु पर्छ । किनभने झण्डै महिना दिनसम्म लकडाउन हुँदा उनीहरुको पनि अवस्था उस्तै हुन्छ । गरिवीका कारण कोहीपनि भोकै मर्नु हुन्न । हामी ज–जस्लाई समस्या पर्छ सहयोग गर्दै जान्छौं । अहिले तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वडा नम्वर १ मा ६०१ परिवार, २ मा ४५० परिवार, ३ मा ३४९ परिवार, ५ मा २८० परिवार, ६ मा २५६ परिवार र ७ मा २५० परिवार विपन्न छन् । यो प्रारम्भिक र पहिलो चरणको मात्रै हो । पहिलो चरणका लागि हामीले तीन सय क्वीटल चामल वाढेका छौं अझै दुई सय क्वीटल बाढ्ने तयारी गरिरहेका छौं ।
विपद्को पूर्ब तयारीका लागि क्वारेन्टाइन पनि बनाउनु भएको छ । कति बेडको क्वारेन्टाइन कहाँ–कहाँ बनाउनु भएको छ अनि क्वारेन्टाइनमा कति मानिसलाई राखिएको छ ?
सकभर विपद नआओस् । विपद्कै लागि भनेर हामीले दुई ठाउँमा २०÷२० वेडको क्वारेन्टाइन तयार गरेका छौं । डिल्लीराज मावि टाघनडुब्बा र जनता मावि शरणामतिमा छन् हाम्रा क्वारेन्टाइन । क्वारेन्टाइनमा २० जना मानिस छन् अहिले । त्यस्तै होम क्वारेन्टाइनमा पनि ३३ जना मानिस रहेका छन् । हामीसंग क्वारेन्टाइनमा भएका २० जना मानिसहरु भारतबाट आएका हुन् । जसमध्ये ११ जनालाई डिल्लीराज र ९ जना जनतामा तयार गरिएको क्वारेन्टाइनमा छन् ।
उनीहरुलाई खाद्यन्यको प्रवन्ध कसरी गर्नु भएको छ ?
शुरुमा गाउँपालिका आफैले खाद्यन्यको व्यवस्था मिलाएको थियौं । पछि सहारा नेपाल सहकारी संस्थाले खाद्यन्यको प्रवन्ध गरेको छ । अहिले हामीसंग क्वारेन्टाइनमा रहेका सबैलाई सहारा नेपालले खाद्यन्य प्रदान गरिरहेको छ ।
खुल्ला सिमाना छ भारतबाट लुकी छिपी हिडेर नेपाल प्रवेश गर्छन भन्ने सुनिन्छ के यो साँच्चो हो ? यदि हो भने त्यसलाई रोक्न के गर्दै हुनुहुन्छ । भारतमा धेरै संक्रमित भइसके भारतमा रहेका नेपालीहरु हिँडेरै यो नाका प्रयोग गर्दै आएभने उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्नु हुन्छ ?
भारतबाट आएका नेपालीलाई अहिले जसरी हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेका छौं अब कोही यो टाघनडुब्बा नाका हुँदै व लुकी छिपी खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै जो कोही नेपाल प्रवेश गर्छ उनीहरुलाई सर्वप्रथम १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्छौं । पहिलो कुरा त हामी यो नाकाबाट कोही कसैलाई नेपाल प्रवेश नै गर्न दिदैंनौं । भारतपनि अहिले कलडाउन छ । सायदै नआउलान यो नाकाबाट । तर, पनि सुरक्षा निकायसंगको समन्वयमा हामीले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई निगरानी उच्च बनाउन भनेका छौं । हामीले पनि साथ दिएका छां । जसका लागि स्वयम् सेवक परिचालन गरिएको छ । हामीले प्रहरीसंगै स्वयमसेवक परिचालन गरेका कारण सायदै यो नाकाबाट केही नआउलान् । प्रहरीले पनि थप जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको छ ।
अन्त्यमा झापा गाउँपालिका वासीलाई के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?
सबैलाई संयमित रहन आग्रह गर्छु । लकडाउनको पूर्ण पालना गरैं भन्ने मेरो पहिलो सन्देश रहेको छ । यो समयमा तपाई सिङ्गो झापा गाउँपालिकावासी नआत्तिनु होस् । तपाईहरुसंग हामी छौं । यो विपद्को घडीमा तपाईहरुलाई केही हुँदैन यदि तपाइले सरकारको निर्देशन मान्नुभयो भने । वाँकी कुरा रह्रयो खाद्यन्यको, हामी तपाईलाई अफ्यारो परे खबर गर्नुहोस् घर–घरमै खाद्यन्य ल्याइदिन्छौं । यो काममा हामी सबै जनप्रतिनिधि जुटेका छौं । हाम्रो अन्तिम प्रयत्न भनेकै तपाईको सेवा गर्नु हो । आवश्यक परेको खण्डमा हामी हरदम तपाईको साथमा छौं । अत्यावस्यक काम बाहेक तपाई झापा गाउँपालिकानासी कोही पनि घरबाट वाहिर ननिस्कनुहोस् । प्रस्तुति – सुरेन्द्र भण्डारी